फाइभजी : हामीलाई घरमा पनि यसको आवश्यकता किन पर्छ ? « Lokpath
२०७७, २७ पुष सोमवार १४:४६
प्रकाशित मिति : २०७७, २७ पुष सोमवार १४:४६
काठमाडौं । स्मार्टफोनका लागि फाइभजीको उपयोगिताबारे कसैको शायदै दूई मत होला । तर, वाईफाई उपलब्ध हाम्रा घरमा यसको आवश्यकताका बारेमा कहिल्यै सोच्नु भएको छ ? विस्तारै वाईफाई पुरानो प्रविधिका रुपमा स्थापित हुँदैछ ।
आफ्नो चरैतिर हेर्नुहोस् त । स्मार्टफोन्स, ट्याब्लेट्स र कम्प्युटरका साथै सेक्योरिटी क्यामेरा, स्पिकर, टिभी, लाइटनिङ प्रणाली लगायत हामीले विशेष ध्यान नदिने वस्तुहरुमा पनि यसको आवश्यकता उत्तिकै रहेको छ । गहिरिएर ध्यान नदिएतापनि हामी विस्तारै स्मार्ट घरहरुले उपलब्ध गराउने सहजतासँग हामी अभ्यस्त हुँदै गइरहेका छौँ ।
समयसँगै हरेक कुरा स्मार्टर हुँदै गइरहेका छन्, हरेक होम अप्लायन्सेस् कनेक्टेड हुँदैछन् र तिनले एकअर्कासंग सहज समन्वय गर्दै काम गरी सहजता उपलब्ध गराओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसले वाईफाई माथि ठूलो बोझ थपिने निश्चित छ । फलस्वरुप न्यूनतम उत्पादन कनेक्ट गर्दापनि यसको रेस्पोन्स टाइममा ढिलाई हुने सम्भावना रहन्छ । यस्तो समयमा फाइभजीको आवश्यकता अझ बढ्ने निश्चित छ । फाइभजी सहितको स्मार्ट होम्स अर्थात् असिमित कनेक्शन, तिब्र गति र तत्सम् प्रतिक्रिया (ईन्स्ट्यान्ट रेस्पोन्स टाइम) ।
बहु-उपकरणहरु एकै समयमा एकै ब्याण्डविथमा कनेक्ट हुँदा ईन्टरनेटको गतिमा समस्या हामी सबैले भोगेकै छौँ ।
अझ ब्रोडब्याण्डको गति कम हुँदा यसले अझ तनाव दिन्छ । फाइभजीको साथमा कथाले स्वभाविक रुपमा अर्कै मोड लिने निश्चित छ । फाइभजीले मल्टि-गिगाबाइट स्पिडका साथै, बहु-संख्यक उपकरणलाई कनेक्टिभिटी प्रदान गर्ने क्षमता बोक्नुका साथै, डर्जनौँ वा सयौँ स्मार्ट उपकरणहरु स्मार्ट होममा कनेक्ट गर्ने क्षमता राख्छ । स्मार्टफोन, टीभी, कम्प्युटर, ट्याब्लेट लगायत तपाईँका सबै उपकरणले एकैसाथ हाई-डेफिनेशन मुभि डाउनलोड, म्यूजिक स्ट्रिम गर्ने वा ठूला अनलाईन गेम्सको मज्जा घरमा रहेका अन्य उपकरण तथा सेन्सरमा कुनै असरबिना लिन सकिन्छ । एआर/भीआर उपकरणहरु मार्फत हामीले भविस्यमा अझ सहजरुपमा स्मार्ट होम अनुभव लिन पाउने छौँ ।
पछिल्लो समयमा स्मार्ट होम्समा वाईफाई र ब्ल्यूटूथ लगायत सञ्चार प्राटोकल्सको उपायोग हुन्थे । तर, एउटा सञ्जालमा जडिट उपकरण र अन्य सञ्जालमा रहेका उपकरण एक(अर्कासँग अन्तरक्रिया गर्न असमर्थ हुन्थे । यसले गर्दा एकिृत स्मार्टहोम अनुभव उपलब्ध गराउन कठिनाइ हुने गरेको छ । यसको ठिक बिपरित फाइभजी सञ्जालमा कुनैपनि उपकरण सिधै कनेक्टेट हुन सक्छन् ।
साथै, समान प्रोटोकलको उपयोग गर्दै अन्य उपकरणसंग ईन्टरकनेक्टड हुँदै अन्तरक्रिया गर्ने छुट समेत प्रदान गर्छ । यसले गर्दा विस्तृत स्मार्ट होम ईकोसिस्टमको निर्माण गर्ने कार्यमा सहजता मिल्छ । फाइभजीले बिद्यमान तारे (वायर्ड) पुर्वाधारमा निहित हुनुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य गराउँछ । यसको माध्यमबाट विकट स्थान जहाँ ब्रोडब्याण्ड लगायतका सुविधापनि उपलब्ध छैनन् , त्यस्ता स्थानमा समेत स्मार्ट होमको अत्याधुनिक प्रविधिको अनुभव लिन सकिन्छ ।
कनेक्शनको अवधारणा जग मात्र हो, जबकी एकिकरण र अभिसरण भविस्य हो भन्ने ओपोको विश्वास छ । ईन्टरनेट अफ एकस्पेरियन्सको यूगलाई दृष्टिगत गर्दै अत्याधुनिक तथा बिस्तृत स्मार्टहोम ईकोसिस्टम निर्माण तथा विकासका लागि ओपोले विभिन्न स्मार्ट उपकरणहरु सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । ब्यक्तिगत, घर, यात्रा तथा कार्य सेटिङका लागि हबका रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने फाइभजी सीपीई सिरिज यसैको एक उदाहरण हो । ओपोले एयरबड्स, वाट्चेज्, टीभी लगायतको बृहत्त पोर्टफोलियोका साथै ओपो एआर, ग्लास जस्ता नवप्रबर्तनात्मक कन्सेप्ट प्रडक्ट्सको पनि निर्माण गरिसकेको छ । फाइभजीलाई ब्यापक अपनत्व प्राप्त हुँदै जाँदा स्मार्ट होम्स र अन्य आईओटी उपकरणहरुले निश्चितरुपमा हामीलाई हाम्रो सोचभन्दा टाढाको फ्यूचरिस्टिक अनुभव प्रदान गर्नेछ ।